Sida looga daawado moobilka FC Barcelona vs Real Madrid | Androidsis
Maanta waa maalin ku weyn kuwa jecel kubada cagta. Waana in saacado yar gudahood aan ku raaxeysan doono mid ka mid ah kulamada aadka loo wada sugayo ee uu qabto taageere kasta oo ka tirsan boqorka isboortiga Spain: the FC Barcelona vs. Real Madrid waxay wajahayaan lugta hore ee Horyaalka. Tan darteed waxaa jira kuwo badan codsiyada si loo raaco natiijooyinka ciyaarta, in kastoo aan aragno sida loo arko iyadoo nool.
Waana midda caanka ah ee caanka ku ah adduunka kubbadda cagta inay dib ugu soo laabato culeyskii ay ku soo jiidan lahayd malaayiin taageerayaal kubbadda cagta ah oo aan seegi doonin dhacdadan. ¿Waqtigee ayey tahay FC Barcelona vs Real Madrid kulamada La Liga 2018/2019? Markay tahay 16:15. Laakiin sida looga arko taleefankeena gacanta ee Android?
Goorma iyo sida loo arko FC Barcelona vs Real Madrid
Waxaan ka hadleynaa suurtagal Lopetegui kulankiisii ​​ugu dambeeyay isagoo tababare u ah Real Madrid ka dib guuldaradii joogtada aheyd ee macalinka ka soo wajahday Horyaalada iyo Champions League, kooxdii cadaanka aheyd tartankeedii uurjiifka. Meerisyadu aad bay u maqan yihiin Cristiano Ronaldo, oo haatan u ciyaara kooxda Juventus. Dhanka kale, FC Barcelona waxay la timid guuldaro dhab ahaantii dhabar jab weyn ku noqotay taageerayaasha culimada: Lionel Messi looma yeerin dhaawac dartiis.
Ciyaarta FC Barcelona vs Real Madrid waxaa lagu sii daayaa kanaalka Bein La Liga sidaa darteed sida ugu fiican ee lagu arko waa inaad kala soo baxdo dalabka Bein La Liga taleefankeena Android. Haddii ay dhacdo inaad qandaraas ku qaadatay kanaalkan kubbadda cagta ee loo maro Vodafone, Orange ama Movistar, waxaan sidoo kale kuu deyneynaa xiriirka soo dejinta
Soodejiso Bein Connect ee Android
Kala soo bax Vodafone Android
Kala soo bax Orange for Android
U soo dejiso Movistar + for Android
Haddii aadan qandaraas ka helin adeegyada Bein Sport oo aad rabto inaad aragto FC Barcelona vs Real Madrid, waad awoodaa isticmaal barnaamijkan kaa caawin kara. Mar dambe lagama heli karo dukaanka arjiga Google, laakiin waxaad had iyo jeer ka eegi kartaa APK Mirror oo fiiri haddii ay si sax ah u shaqeyso. Sida had iyo jeer ah, annagu mas'uul kama ihi isticmaalkeeda, waxaan keliya oo kugula socodsiinaynaa qaab awood ah kubbada cagta si bilaash ah u daawo.
Wadada buuxda ee maqaalka: Androidsis » Noticias » Sida loo daawado moobilka FC Barcelona vs Real Madrid
Sida loo ogaado haddii batteriga taleefankaaga Android uu wanaagsan yahay